Idale leNominations Court Lihlala eTredgegold Magistrate Court
Ilunga elkhomishini ebona ngezokhetho koBulawayo eZEC, uMnunzana Innocent Ncube nguye obekhokhela idale leNomination Court, eliqale ngehola lesitshumi ekuseni wamemezela amagama alabo abenelise ukusa abaphepha abo enomination, baqala lokwamukela amatsha idale laze lavala sekusele abantu abadlula amatshumi amabili.
Idale leNominations Court
Ukhomishina weZEC, uNkosikazi Sibongile Ndlovu uthi koBulawayo idale elibhalisa abancintisa kukhansili lasedale lephalamende bekugcwele kuphithizela, njalo abantu abakade besele bengangenisanga amaphepha abo bephakathi bazawamukela kodwa abatshayelwe lihola lesine bephandle sekuvaliwe abasoke bawamukele.
"Idale leNomination Court koBulawayo ligcwele abantu labo abatshayelwe yisikhathi bephakathi sizabansebenza sibaqede silandela umthetho kuthi labo abatshayelwe yisikhathi bephandle asisoze sibamukele".
UNkosikazi Buhle Tshabangu-Moyo omele iWIPSU koBulawayo ongene idale leNomination Court laye uchaze udubo olubhekane labesifazana abakhangelele ukungena kukhetho lwalonyaka.
Sesixoxe labesifazana abanengi lapha edale njalo babhekane lenkinga ezinengi, abazi ukuthi babhale njani, abalamali yokusebenzisa kodwa labo abazphumelela eNomination Court sizabasisa namaphepha okukhankasa.
Isikhulumeli seMRP, uMnunznana Mbonisi Gumbo uthi ibandla lakhe lenelisile ukungenisa amaphepha abo lobanje kulobunzima lokuphuza okuthile.
"Senelisile ukungenisa amaphepha ethu eNomination Court yakoBulawayo yedale lekhansili udubo yikuthi bayaphuza njalo kukhona okungahambi kahle eZEC noba uluhlu lwababhakisele ukuvota asikaluphiwa".
Isikhulumeli seZAPU, uMnunzana Iphithule Maphosa uthi benelisile ukungenisa amaphepha abo kanye lomongameli wabo oye eHarare.
"Senelisile ukungenisa amaphepha ethu loma idale selivalile sesilinde ukubhadala njalo lomongameli wethu wenelisile ukunenisa amaphepha akhe".
Omunye njalo owenelise ukungena idale lokhetho leNomination Court, uNkosikazi Nomvula Mguni uchasisa ngophawu abalusebenzisayo.
Uphawu lweMDC-T ekhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe
"Senelisile ukungenisa amaphepha ethu sisebenzisa uphawu olulesandla esivulekileyo lomntwana olesandla phakathi, konke kuhambe kuhle asiladubo esibhekane lalo".
Akula zehlakalo zodlakela kumbe ukuxokozela okube khona ekungeniseni ingwalo zokubhalisa ukuncintisa kukhetho ngaphandle nje kwesika Msekeli kaMongameli weMPR, uNkosazana Presia Ngulube obikwa ebotshwe lidale leNomination Court ngemva kokuba ucingo lwakhe lukhale ephakathi lisahleli.
IZimbabwe isifike esibangeni esiphezulu samalungiselelo okhetho olwenziwa ngoNtulikazi mhla ka 30 lonyaka. Ikhomishini yeZEC ivule idale lenomination court kwaze kwadlula ihola lesine ntambama saze saya emoyeni lilokhe lihleli lingakaqedi.
Amanye amalunga amele ibandla leMDC-Alliance abe lokudana kulandela ukukhutshwa kuluhlu lwabazamela ibandla ekhansilini lase dale kufakwa abanye, into abayisole kakhulu.
Udaba lweNominations Court koBulawayo siluphiwa nguAnnahstacia Ndlovu